Microsoft dia manala an'i Docs.com taorian'ny hadisoana lehibe tokoa. Vaovao momba ny gadget
Raha matetika ianao ao amin'ny Office, dia azo antoka fa tamin'ny fotoana sasany dia nampiasa ny asan'ny fikarohana natolotry ny sehatra Microsoft anao amin'ny anarana hoe docs.comRaha tsy fantatrao izay tena izy dia lazao fotsiny hoe inona izany, raha namaky tsara ianao satria nanapa-kevitra ny orinasa amerikana ny hanafoana azy tanteraka amin'ny suite malaza, ny sehatra miandraikitra ny fizarana antontan-taratasy tafiditra ao amin'ny Office mihitsy.
Nanaraka ny fitarainan'ny mpampiasa maro fa toa naharihary tamin'ny alàlan'ny Twitter ny fisie sy ny mombamomba azy ireo. Ireo fitarainana ireo dia efa ampy ary ambonin'izany rehetra izany dia mitohy mandritra ny faran'ny herinandro. Araka ny nambaran'izy ireo dia toa afaka nanao ilay motera fikarohana miditra amin'ny antontan-taratasy sy rakitra apetraka ao amin'ny tranonkala, izay miankina amin'ny fikirakira anao, dia tokony hijanona ho irery.
Ny sehatry ny Docs.com an'ny Microsoft dia namoaka antontan-taratasy an'arivony manana fampahalalana saro-pady momba ny mpampiasa azy.
Toa sy araka ny nambara, anisan'ireo fampahalalana tsy fantatra, ohatra, ny fanekena asa, ny fifanarahana fisaraham-panambadiana, ny portfolio-na famatsiam-bola, ny kaontin'ny kaonty mifandraika amin'ny carte de crédit, ny lisitry ny teny miafina ... na ny sasany amin'ireo antontan-taratasy ireo aza Ampidiro ny mombamomba anao sy manokana toy ny nomeraon-telefaona, adiresy paositra, adiresy mailaka, fahazoan-dàlana hamily fiarakodia ary koa nomeraon-jotra sosialy.
Amin'izao fotoana izao i Microsoft, na dia nesoriny aza io safidy io tamin'ny sabotsy lasa teo, dia mbola tsy namoaka karazana fanambarana an-gazety na zavatra hafa mitovy aminy hazavao ny zava-nitranga tamin'ity motera fikarohana ity. Na izany aza, marina ihany koa fa ny orinasa dia nihetsika haingana mba hanandrana hanitsy io hadisoana lehibe io faran'izay haingana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Microsoft dia manala an'i Docs.com taorian'ny hadisoana lehibe iray